कहाँ अड्कियो नेकपाको कार्यविभाजनको हलो ? - Nepal's Digital News Paper
कहाँ अड्कियो नेकपाको कार्यविभाजनको हलो ?
काठमाडौं । नेकपाका केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजनका लागि बुधबार देस्रो दिन पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सचिवालय बैठक बस्यो । तर, कुरा मिलेन । जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा मापदण्डमै कुरा नमिलेको एक नेताले बताए ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनबारे छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताए । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यव्यस्तताले बुधबार जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको टुंगो लगाउन नसकिएको उनले सुनाए ।
‘पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्को विशेष कारणले गर्दा ठोसरुपमा इन्चार्ज र सहइन्चार्ज टुंग्याउने प्रक्रियामा प्रवेश गर्दागर्दै पनि समयले साथ दिएन’, उनले भने ।
बिहीबार जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको टुंगो लगाएर थप कार्यविभाजनका विषयमा प्रवेश गर्ने उनले बताए । पार्टी एकताको एक वर्षपछि नेकपाले पोलिटब्युरो गठन थाती राखेर विभागहरुमा जिम्मेवारी तोक्ने तयारी गरेको छ । तर, एकै विभागमा दुई–तीन जना नेता दाबेदार निस्किएपछि शीर्ष नेतृत्वलाई मिलाउन सकस परेको हो । यो अवधिमा नेकपाले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लालगायत कमिटी गठन गरिसकेको छ ।